Ingaba 3D izinto eziprintiweyo umphefumlo? Thatha ukuba wazi izinto zishushu yoshicilelo 3D - China Cixi Lanbo Printing
Ingaba 3D izinto eziprintiweyo umphefumlo? Thatha ukuba wazi izinto ishushu yoshicilelo 3D
Abantu abaninzi ingqalelo 3D yoshicilelo, kuqala kwiinto zonke, ukuba babethanda izinto ezincinane ezintle eprintiweyo yi 3D. Ngaphezu koko, abanye abahlobo ozakukhathala yokusebenza imifuziselo ezahlukeneyo abashicileli 3D, kunye nezinto 3D yoshicilelo ziye babesilela kwiimeko ezininzi. Enyanisweni, izinto yoshicilelo 3D kunokuthiwa ukuba qho izinto ebalulekileyo kuphuhliso 3D technology yoshicilelo. Ukuqulunqwa kwezinto ezisetyenziswa ekuncediseni becala kugqiba enoba kushicilelo 3D ingasetyenziswa kakhulu ngokubanzi.
Okwangoku, 3D phepha ikakhulu ziquka izinto Polymer, izinto zesinyithi, izixhobo umgubo, izinto yodongwe kunye nezinto ahlanganisiweyo.
izinto Polymer ikakhulu ziquka iiplastiki zobunjineli, bio-iiplastiki, iiplastiki thermosetting, nentlaka photosensitive, njl, kunye nokusebenza lweentlobo ezahlukeneyo izinto ngendlela eyahlukileyo.
Engineering zeplastiki ibhekisa zeplastiki mveliso kusetyenziswa iindawo zoshishino okanye izixhobo istili yangaphandle. It is a yeplastiki ngamandla kakhulu, ukumelana nempembelelo, ukumelana ubushushu, ngokuba lukhuni kunye nokumelana nokuguga. It is a uhlobo lwe 3D izinto yoshicilelo uluhlu olubanzi lwezicelo; bioplastics It ikakhulu une Pla, PETG, PHB, njl, kwaye biodegradability elungileyo; thermosetting resin na amandla aphezulu kunye ukumelana nomlilo, yaye ilungele kakhulu ngumgubo laser sintering inkqubo bokwakha usebenzisa woshicilelo 3D; resin photosensitive iye isantya ngokukhawuleza enganyangekiyo, itheyibhile Excellent yokusebenza owomileyo, imbonakalo agudileyo emva ambumbe, kulukhetho ezininzi ophezulu-ngqo iimveliso zoshicilelo.
Nangona uninzi lwezinto yangoku yoshicilelo 3D kukho iiplastiki, amandla elungileyo zomatshini kunye Unikezelo lombane lwe intsimbi ziye zenza abaphandi abanomdla kakhulu kushicelelo bezinto yesinyithi. Izinto eziphambili metal ziquka iintsimbi ayoni kuquka insimbi kunye superalloys, kunye nesinyithi non-ayoni ezifana titanium, nemagnesium ingxubevange, kunye kaLayishe waseGalim.
It akuyonto izinto yeplastiki okanye izinto yentsimbi, kodwa bhetyebhetye kwawo kwancamisa ukuya 3D technology yoshicilelo, izinto umgubo kusekho ukhetho omhle 3D yoshicilelo. 3D yoshicilelo kufuna izinto eziphakamileyo ezingumgubo, kwaye kufuneka umgubo yokubumba ukuba formability elungileyo eziphathekayo, amandla aphezulu ukubumba, ubungakanani umgubo yamasuntswana encinane, ubunzima agglomeration, ipropati elungileyo qikeka, ingxinano efanelekileyo kunye porosity, futhi omisa fast and lukhuni. I yokuqala zokuchela isanti lomshicileli uhlobo 3D self-eziveliswa ziqulunqwe BUZA Technology Co., Ltd. usebenzisa isanti zwi in izinto powder.
powder yodongwe Aluminosilicate ungasetyenziswa 3D eziprintiweyo iimveliso yodongwe. I-3D eshicilelweyo imveliso yodongwe yi xhungu amanzi, ubushushu (ukuya ku 600 ° C), isetyenziswe kwakhona, non-ityhefu, kodwa amandla ayo ayikho phezulu, oku kusetyenziswa cookware ofanelekileyo, tableware (iikomityi, iindebe, iipleyiti, iqanda neekomityi iitreyi)) kunye nezinto uhombiso ekhaya ezifana zezibane, iithayile, zitsha, kunye yobuciko.
Alithandabuzeki elokuba, njengoko isiseko 3D bokushicilela, 3D izixhobo zoshicilelo uya kuba urhwebo ebalulekileyo yoshicilelo 3D elizayo. izinto ngakumbi nangakumbi ukusebenza elihle iya kuphuhliswa ukukhuthaza uphuhliso loshishino yoshicilelo 3D. Ukongeza, ukongeza kwiincwadi yoshicilelo 3D, wabagagamela ubuchwepheshe engundoqo kunye namacandelo ezingundoqo 3D ushicilelo kwakhona idabi ebalulekileyo kuphuhliso loshishino yoshicilelo 3D yasekhaya. Isaqhwithi series 3D umshicileli esisungulwe BUZA ke inkjet printhead yokuqala kuphuhliswa e China. (Components core yoshicilelo 3D) sisiganeko, yaye ndiyathemba ukuba iinkampani ezininzi China ilondoloze amandla ngakumbi ekuphuhliseni 3D core yoshicilelo technology kunokuba athembele ngokupheleleyo ithekhinoloji amazwe.